पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन्, पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवालीसँगको अन्तरवार्ता « Bizkhabar Online
पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन्, पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवालीसँगको अन्तरवार्ता
26 December, 2020 5:15 pm
काठमाडौँ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो । भूकम्प अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लाका निजी आवास, सांस्कृतिक धरोहर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक र खानेपानी संरचनालगायत पुनःनिर्माणको चुनौती प्राधिकरणसँग थियो ।
प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार काम गरिरहेको छ । ऐनअनुसार पाँच वर्षमा पुनःनिर्माणका काम नसकिएपछि प्राधिकरणको म्याद यही पुस १० गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । प्रस्तुत छ भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका विषयमा प्राधिकरण स्थापनापछि लामो समय प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश ः
प्राधिकरणले पाँच वर्षको अवधि दिएको २०७२ मै सम्झौता गरे पनि घर बनाएको छैन, अब पर्खने कुरा हुँदैन । सात लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राही ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिए । अब उनीहरूले घर बनाउन थाल्नुप¥यो ।
उत्तर ः छानविन हुन्छ । यसअघि छ लाख बढीले प्राधिकरणमा गुनासो गरे । जनताले कर तिरेको पैसा दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ । साँच्चिकै पाउनुपर्ने छुटेको भए पुनरावेदनको व्यवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधिशको अध्यक्षतामा रहेको पुनरावेदन समितिले यसको निर्णय गर्छ । हाल धेरैले पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
प्रश्न ः निजी आवास पुनःनिर्माणमा पछिल्लो समयमा के समस्या छ ?
प्रश्न ः पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणमा स्थानीय समुदायलाई आकर्षित गरिएन भन्ने गुनासो छ नि ?
पुरातात्विक सम्पदा पुरानैस्वरूपमा गुणस्तर उही हुनेगरी बनाउनुपर्छ । खरीद कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट रु १० करोडसम्म खर्च गरेर सम्पदा पुनःनिर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रु एक करोडसम्म मात्र पाइने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले यथेष्टरूपमा सम्बोधन गरेको छ । जापान, भारतलगायत देशका सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम शुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारमात्र होइन दातृ निकायको काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भएको छ ।
पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने ९२० सम्पदामध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढीको काम सकिएको छ । पछिल्लो समय द्रुत गतिमा सम्पदा पुनःनिर्माण भएको छ । सम्पदाको ऐतिहासिकता बचाउनुपर्ने भएकाले पनि शुरुमा ढिला भएको हो । धेरै सम्पदा चालू आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वरलाई प्रताप मल्लकालीनस्वरूपमा पुनःनिर्माण गरिएको छ । काष्ठमण्डप पनि पुरानैस्वरूपमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । प्रताप मल्लको पालाको जस्तो इँटा बनाउन लगाएर बालगोपालेश्वर पुनःनिर्माण गरिएको छ ।
प्रश्न ः सम्पदा पुनःनिर्माणमा किन स्रोत अभाव भइरहेको छ ?
उत्तर ः यस्तै गुनासो आएपछि शौचालय र खानेपानी संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु सात अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ चालू आर्थिक वर्षमा । पुनःनिर्माण भएका सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा छात्र एवं छात्राको अलग्गै शौचालय र खानेपानी पु¥याउने विषयलाई प्राधिकरणले अभियानका रूपमा अघि लैजाँदैछ ।
गैर सरकारी संस्थाले गरेका पुनःनिर्माणका कामको अनुगमन प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायले नगर्दा अपारदर्शी रूपमा खर्च एवं काम भएको गुनासो आएको छ नि ?
गत वर्षदेखि विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा बढेको छ । कोरोनाका कारण भूकम्पपछिको पुनःनिमणि कति ढिला हुन्छ ?
सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सिंहदरबार, धरहरालगायत संरचना पुनःनिर्माण भइरहेका छन् । सिंहदरबारमै ३०० जना कामदारले नियमितरूपमा काम गरिरहेका छन् । आगामी असारसम्ममात्र प्राधिकरणअन्तर्गत पुनःनिर्माणका काम गरिन्छ । साउनपछि लेखापरीक्षण, स्रेस्ता अन्तिम रुप दिइ सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण, अभिलेखीकरण गर्ने काम हुन्छ ।
अभिलेखीकरण गर्ने काम बृहत्तररूपमा अघि बढेको छ । यसका लागि १०० वटा अनुसन्धान पत्र छ । पुनःनिर्माणमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको अनुभव भएका व्यक्तिले समेत अनुसन्धानपत्र लेख्नुभएको छ । यस्ता अनुसन्धानपत्र २५ वटा अन्तरराष्ट्रियस्तरका जर्नलमा प्रकाशित गर्न लागिएको छ । पुनःनिर्माणको यो अनुभवलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखबद्ध गर्न लागिएको छ ।
विसं १९९० को भूकम्पको अनुभवका रूपमा हामीसँग ब्रह्मशमशेरको पुस्तकबाहेक अरु केही छैन । यसैले विसं २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको पुनःनिर्माणका अनुभव संलग्न अनुसन्धानपत्र, कागजातलगायत दस्तावेज हामी भावी पुस्ताले समेत अध्ययन गर्न सक्ने गरी सुरक्षितरूपमा राख्दैछौँ ।
यी  अनुभव समेटेर मैले कुनै बेला पुस्तक लेख्नेछु । धेरै कथा, व्यथा छ । धैर्यता र लगनशीलताले परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । भूमिहीन, गुठी समस्या भएका लाभग्राहीका समस्या कानून परिवर्तन गरेर गरिएको छ ।